बिचार – " कञ्चनजंगा News "
मेरो विचारमा अभिनय असुरक्षित पेसा हो– नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि !
No Comments on मेरो विचारमा अभिनय असुरक्षित पेसा हो– नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि !
म अभिनेता हुँ। र, मेरो विचारमा अभिनय असुरक्षित पेसा हो– नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि। यसमा लागेका सबै व्यक्तिले जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन।कुनै व्यक्तिलाई अभिनय आउँछ भन्नेबित्तिकै त्यो सफल हुन्छ भन्ने छैन। किनकि यो सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पेसामध्येको हो। कुनै पात्र उति राम्रो अभिनय गर्न जान्दैन तर, पर्दामा दर्शकले रुचाइदिए भने ऊ अघि बढ्न सक्छ।
कोही ६ वर्ष तालिम गरेर आएको व्यक्ति अभिनयमा कुशल छ भने पनि दर्शकले नरुचाउन सक्छन्। ऊ हाँसेको मन नपराउन सक्छ। नाचेको मन नपर्न सक्छ।अरु पेसा जस्तो मसँग डिग्री छ, कम्तीमा ३० वर्ष जागिर खान सक्छु भन्ने पेसा होइन यो। म यो क्षेत्रमा रहेको ३२ वर्ष हुन लागिसक्यो। सुरुमा प्रत्येक ६ महिनापछि अर्को ६ महिना टिक्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने लागिरहन्थ्यो।
पहिलो फिल्म सफल भयो भन्दैमा कलाकार सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन। यो साल सफल भए अर्को साल सफल नहुन पनि सकिन्छ।हाम्रैमा कति कलाकार नाम कमाएर पछि विस्थापित भएका छन्। तर केही व्यक्ति सफल भएरै अहिलेको माहोल बनेको छ। पहिले यस्तो थिएन, अहिले जो जो सफलताको निश्चित विन्दुमा पुग्न सक्छन्, उनीहरूले निरन्तरता दिन सके यही क्षेत्रबाटै जीवन चलाउन सकिने वातावरण तयार भएको छ।
पहिले कलाकारको जीवनस्तर मात्र होइन, चलचित्र पनि स्तरीय थिएनन्। हामीले मनोरञ्जनका लागि मात्र चलचित्र बनाउँथ्यौं। फर्मुलाभन्दा बाहिरका, समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने खालका फिल्म नगन्य हुन्थे। मलाई नै मेरा दुई तीनवटाभन्दा बढी फिल्म चित्तबुझ्दा लाग्दैनन्।
तर, त्यसो भन्नुको अर्थ मलाई मेरा फिल्म मन पर्दैनन् भन्ने होइन। उति बेला मेरा चलचित्र अत्यधिक रुचाइन्थे। म अत्यन्तै व्यस्त थिएँ र मेरा चलचित्रबाट दर्शकले प्रशस्त मनोरञ्जन लिए।समग्रमा हेर्दा, विश्वमा बनिरहेका बनिरहेका चलचित्रका मापदण्डअनुसार हाम्रा चलचित्र खरो उत्रन सकेका छैनन्। जबसम्म त्यो हिसाबमा चलचित्र बन्दैनन्, तबसम्म आफूले गरेको काममा शतप्रतिशत सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन।
हाम्रोमा एउटा चलचित्र हिट हुनेबित्तिकै संसारमा सबैभन्दा राम्रो चलचित्र मेरै हो भन्ने परिवेश छ। त्यस्तोमा मलाई आफ्नै चलचित्रको समालोचना गर्दा अनौठो लाग्न सक्छ ।अहिलेसम्म बनेका नेपाली चलचित्रको कुरा गर्दा पोख्त सिने दर्शक वा समीक्षकले एकाधमा बाहेक चित्त बुझाउने बाटो छैन। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। तर, त्यसको मतलब हाम्रा चलचित्रले हाम्रो बजारको मागलाई परिपूर्ति गरेका छैनन् भन्ने होइन। दर्शकले नरुचाएको पनि होइन। विश्वबजारको तुलनामा कमजोर भएको मात्र हो।
नेपाली फिल्मको कमजोर पक्ष भनेको स्क्रिप्ट र निर्देशक हुन्। निर्देशक नै हो, जसले सिनेमालाई हाँक्छ। चलचित्रमा पर्याप्त लगानी पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। निर्देशक सिर्जनशील छ, विधालाई राम्रोसँग बुझेको छ भने चलचित्र जुनसुकै बजेटले पनि बन्न सक्छ।
घर बनाएजस्तै हो चलचित्र भनेको। कसैले सीमित बजेटमा पनि चिटिक्कको घर बनाउँछन्, कसैले ठूलो लगानीमा दरबार नै बनाउँछन्। कतिले करोडौं खर्चेर पनि चारवटा भित्ता र छानो भएको संरचना मात्र बनाउन सक्छन्।सिर्जना, प्रस्तुति, कथावस्तु राम्रो हुने हो भने निर्देशकले सीमित बजेटमा पनि राम्रो काम गर्न सक्छ। त्यो हाम्रोमा कमजोरी छ। हामीकहाँ विषयवस्तुलाई प्रभावकारी रुपमा पस्कन सक्ने क्षमता कम छ।
कागजमा हामी एकदमै राम्रो कथा लेख्छौं। तर सिनेमा भनेको कागजमा कलमले लेख्ने होइन। सिनेमा भनेको क्यामेराले लेख्ने हो। हो, त्यही क्यामेराले खिच्ने बेलामा हामी चुक्छौं।कलमले लेखुन्जेल हाम्रो कथावस्तु राम्रो हुन्छ, उत्पातै राम्रो फिल्म बन्ला जस्तो। तर त्यसलाई क्यामेरामा उतार्न हामीले ठूलो मेहनत गर्नुपर्छ। सिर्जनशीलता चाहिन्छ। अधिकांश अवसरमा हामी त्यहीं चुक्छौं।
जेजस्तो अवस्था भए पनि म जहिलेसम्म सक्छु त्यो बेलासम्म चलचित्र क्षेत्रमै हुन्छु। सामाजिक काममै हुन्छु। मलाई राजेश हमाल बनाएको नेपाली फिल्म क्षेत्रले नै हो। हाम्रो समाजले हो। म यहीं हुन्छु।म अत्यधिक फिल्म गरिरहेका बेलासम्म म कति हिट छु, दर्शकबाट बेहिसाब माया पाइरहेको छु भन्ने नै थाहा थिएन। हरेक दिन सुटिङमा व्यस्त हुन्थें। मैले काम गरेका फिल्म र मेराबारे बजारमा भइरहेका चर्चा र प्रतिक्रियाको जानकारी हुँदैनथ्यो।
फिल्ममा सक्रिय हुन छाडेपछि विभिन्न कार्यक्रम र सामाजिक कार्यका लागि देशका विभिन्न स्थानमा पुग्दा पो थाहा पाएँ– म निकै चर्चित भएको रहेछु। त्यसैले म सकुन्जेल अभिनय र सामाजिक कार्यमै सक्रिय रहन्छु। फेसनको प्रभाव :सरसर्ती हेर्ने हो भने नेपालमा फेसनको प्रभाव दक्षिण एसियाका अन्य देशमा भन्दा धेरै छ। नेपाल जति ‘फेसन कन्ससनेस’ न भारतमा छ, न बंगलादेश वा श्रीलंकामा नै। अरु देशको कुनै एउटा क्षेत्रमा वा वर्ग विशेषमा होला। तर, आम समुदायमा छैन।
हामी नेपालका गाउँमा, डाँडाकाँडामा पनि युवाहरु फेसनेबल भएर हिँडेका देख्छौं। भारतका ग्रामीण इलाकामा त्यस्तो छैन। बांग्लादेशमा पनि मौलिक पहिरन कै बोलवाला छ। त्यसैले नेपालीहरु फेसनमा निकै अघि छन् जस्तो लाग्छ। यहाँको जीवनस्तर उकास्ने हो भने झन् कस्तो होला?
९० को दशकसम्म त्यस्तो थिएन गाउँतिर। पछिल्लो १० वर्ष यता फेसनप्रतिको चेतनास्तर बढेको देखिन्छ। नेपालको सामाजिक परिवेश परिवर्तन भएको धेरै भएको छैन। ३० वर्षअघिसम्म ९५ प्रतिशत नेपालीको जीवनशैली र ३०० वर्षअघिकैै हाराहारीमा थियो। छोटो समयमा ठूलो फड्को मारेका छौं हामीले।
कुटो–कोदालो, पँधेरो–गोठको परम्परागत प्रचलन हराउने अवस्थामा छ। वा, रहे पनि त्यसको स्वरुपमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। सुरुसुरुको फिल्ममा सामाजिक परिवेशअनुसारको पहिरन लगाइन्थ्यो। गाउँले पात्रको भूमिकामा उत्रिँदा त्यही खालको फेसन हुन्थ्यो। त्यो पात्र र फेसनमा दर्शकले आफ्नै प्रतिबिम्ब देख्थे। तर, अहिले त्यसमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।
लोकदोहोरी नै हेरौं। गीतको मर्म र भाका उस्तै छ तर, पहिरन असाध्यै फेसनेवल छ। लोकदोहोरीमा एकसे एक फेसनेबल केटाकेटी देखिन्छन्। यसरी हेर्दा समयसँगै फिल्ममा फेसनको प्रभाव पनि फेरिएको छ। समयको गतिसँगै यो परिवर्तन जारी रहन्छ।
महामारीको मर्कामा स्रोह्र श्राद्ध
No Comments on महामारीको मर्कामा स्रोह्र श्राद्ध
भाद्र शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् आगामी बुधबार सोह्र श्राद्ध सुरु हुँदै छ। पितृकार्यलाई शास्त्रहरूमा देवकार्यभन्दा ठूलो मानिएको छ। पितृहरूका नाममा गरिने सोह्र श्राद्धलाई महालय श्राद्ध पनि भनिन्छ। धर्मशास्त्रअनुसार पितृकार्य नगर्दा दोष लाग्छ नै, समयमै नगरे पनि दोष लाग्छ। तर, कोरोना महामारी बढिरहेकाले भेटघाट, जमघटको परिस्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा सोह्र श्राद्ध कसरी गर्ने रु यजमानहरू अलमलमा परेका छन्।
उनका अनुसार श्राद्धादि कर्म सम्पादन गर्ने कर्ताका अगाडि विश्वेदेव र पित्रादि ब्राह्मणको सन्निधि—१, मन्त्रोच्चारण र अभिषेकादि गर्न सक्ने ब्राह्मणको उपस्थिति—२ र कर्मसाक्षित्व वहन गर्ने अग्निरूप देवताको सान्निध्य—३ गरी यी तीनको कार्यसंयोगबाट मात्र परमापूर्व ९पुण्य० उत्पन्न हुन्छ। यजमानले दिएको पदार्थ पितृ आदि देवताहरूले प्राप्त गर्ने एवं गरेको कार्य पूर्ण हुने हुँदा भर्चुअल माध्यमबाट यी सबैको पूर्ति नहुने उनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
No Comments on सधै पढ्छु मोबाइल हेरेर भन्थ्यो छोराले जब कर्तुत थाहा पाए छोराको आमाबाबु धरधरी रोए !
खर्च पारदर्शी बनाउन दबाब दिँदै सामाजिक अभियन्ता ई: अनसन बसेका छन्, उनका ११ बुँदे माग(सबै हेर्नुहोस् )
No Comments on खर्च पारदर्शी बनाउन दबाब दिँदै सामाजिक अभियन्ता ई: अनसन बसेका छन्, उनका ११ बुँदे माग(सबै हेर्नुहोस् )
१२ असार, काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका काम प्रभावकारी बनाउन र खर्च पारदर्शी बनाउन दबाब दिँदै सामाजिक अभियन्ता ई: अनसन बसेका छन् ।
कोरोना महामारीबाट सर्वसाधारणको जीवन बचाउनका लागि आफू अनसनमा बसेको उनले बताएका छन् । शुक्रबार १ बजे दिउँसो पाटन दरबार क्षेत्रमा उनी अनसनमा बसेका हुन् ।
उनी कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन पीसीआर विधिको परीक्षण गर्नुपर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्नुपर्ने, विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर सञ्चालन भएको इनफ इज इनफ अभियानमा सक्रिय थिए ।
हेर्नुहोस् उनका मागहरू
१. पीसीआर परीक्षण वृद्धि – विदेशबाट फर्केका, कोभिड- १९ पुष्टि भएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा रहेका, अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक सेवाकर्मी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग अथवा ज्वरो, स्वाद र सुँघ्ने क्षमताको अभावजस्ता कोभिड- १९ का अरू लक्षण देखिएका र परीक्षणका लागि चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस् । परीक्षण यन्त्र, किट, भीटीएमलगायत अन्य आवश्यक सामग्री सक्दो चाँडो पारदर्शिता कायम गरेर खरिद गरियोस्।
२. आरडीटी रोकियोस् – आरडीटीले केवल संक्रमण लागेको दुई हप्ता पछाडि केही हदसम्म भरपर्दो नतिजा दिन्छ । प्रारम्भिक चरणका संक्रमित पत्ता लगाई कोभिड- १९ फैलनबाट रोक्न पीसीआर परीक्षण अनिवार्य छ ।
३. क्वारेन्टिन रणनीति फेरियोस्‌ – अहिलेको हुलमुले क्वारेन्टिन रणनीतिका कारण जनताले व्यर्थमा दुःख पाइरहेका छन् । क्वारेन्टिन संक्रमण फैलिने र समुदायमा फैलाउने थलो बनेको छ। त्यसैले क्वारेन्टिन रणनीति फेर्नु अनिवार्य भएको छ । बाहिरबाट आएका यात्रुलाई सक्दो चाँडो पीसीआर परीक्षण गरियोस् ।
पोजिटिभ देखिएकालाई उचित स्वास्थ्योपचार प्रवन्ध भएका व्यवस्थित एकलवास केन्द्रमा पठाइयोस्‌ । नेगेटिभ देखिएकालाई घरमा १४ दिने एकल बास बस्ने गरी पठाइयोस्‌ । त्यो सम्भव नभए सम्मानजनक वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् । स्वास्थ्योपचार आवश्यक देखिएमा कोभिड- १९ पोजिटिभ व्यक्तिलाई तत्कालै अस्पताल पुर्‍याइयोस् । हाल हुलमुले क्वारेन्टिनमा बसिरहेकालाई परीक्षण गरेपछि मात्र घर पठाइयोस् ।
४. पारदर्शिता र जवाफदेहिता – कोभिड- १९ सम्‍बन्धी सबै कार्यक्रम र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै भ्रष्टाचार निरुत्साहन गर्ने नीति लिइयोस्‌ । जीवन मरणसँग जोडिएको विषयमा भ्रष्टाचार नहोस् । सबै अर्थपूर्ण आरोपको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् । चुस्त कोभिड- १९ व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका असक्षम व्यक्तिहरूलाई फेर्नुको विकल्प छैन ।
५. अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा – पीपीईलगायत आवश्यक सुरक्षा उपकरणको अभाव नहोस् । स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन योजनामा रहेका प्रावधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्‌ । कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा, सम्मान, र सहजता सुनिश्चित गरियोस् ।
६. कमजोर अवस्थामा रहेका मजदुर कामदार, अस्थायी बासिन्दा र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत र सम्मान – यसबारे सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गरियोस् । सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका दैनिक आयमा आश्रित वर्गलाई व्यवहारमूलक नगदी राहत प्रदान गर्ने सम्भावना तर्फ ध्यान जाओस् । कलंकीकरण र भेदभावलाई कडा कानुनी कारवाही एवं अन्य उपाय लगाई निरुत्साहन गरियोस् ।
७. भएका श्रोत साधनको प्रयोग – सरकारी, संस्थागत र निजी क्षेत्रमा दर्जनौं पीसीआर परीक्षण यन्त्र तथा कोभिड- १९ लाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुन सक्ने अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण छन् । तिनलाई आवश्यक नीति बनाई तुरुन्तै प्रयोगमा ल्याइयोस् ।
८. स्वास्थ्य क्षमता वृद्धि – आईसीयूलगायत अस्पताल क्षमता गम्भीर प्रकृतिका बढ्दो बिरामीहरूको संख्यालाई ध्यानमा राखी वृद्धि व्यवस्थापन गरियोस् । त्यसका लागि आवश्यक सामग्री तुरुन्तै खरिद गरियोस् ।
९. लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रावधान – जोखिमको जानकारीसहित तिनको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्दछ । भौतिक दुरी तथा अन्य संक्रमणबाट बच्ने उपायको स्पष्ट व्याख्या, विस्तृत जानकारी प्रसारण र कडा कार्यान्वयन गरियोस् ।
पार्टीले के भन्छ मलाई मतलब छैन, नागरिकतामा महिला-पुरूष बराबर हुनुपर्छ: शेखर कोइराला
No Comments on पार्टीले के भन्छ मलाई मतलब छैन, नागरिकतामा महिला-पुरूष बराबर हुनुपर्छ: शेखर कोइराला
कोइरालाले बुधबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै ‘अहिलेको जमानामा पनि विभेदकारी संविधान ल्याउनु गम्भीर भूल भएको’ बताएका हुन्।
‘यसमा सबभन्दा नरमाइलो र संवेदनशील पक्ष के भने नेपाली महिलाले बिहे गरेको केटा (विदेशी) नेपालमै बस्छु भन्दा उसले नगरिकता पाउने भएन, यसले उसको अधिकार त हनन भयो नि,’ उनले भने, ‘यो गलत भयो।’
‘कांग्रेसले के भन्छ मलाई मतलब छैन। लिडरलाई भीडले डोर्‍याउने होइन, नेताले भीडलाई सम्झाउने हो। विश्व अहिले महिला-पुरूषबीच समान अधिकारको कुरा गरिरहेको छ। तर, नेकपा ठूल्ठूलो स्वरले बोल्दै छ, कांग्रेस पनि अधिकार नदिने भन्दैछ भने त्यो गलत हो,’ उनले भने।
उनले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी नागरिकले लिन चाहे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नेमा आफ्नो सहमति रहेको बताए।
‘विवाह गरी आएकालाई कति वर्षपछि नागरिकता दिने भन्नेमा छलफल गरौं। त्यसमा दलहरूबीच सहमति गरौं। कुलिङ पिरियड राखे हुन्छ। तर, ‘भोटिङ राइट’ मात्र नपाउने गरी। लोकसेवा दिन पाउनुपर्‍यो, अरू सुविधा र अधिकारमा कत्ति पनि कटौती नगर्ने गरी पाँच वर्ष मात्र राखे हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘महिला र पुरूषबीच समान अधिकार हुनुपर्छ। कत्ति पनि विभेद गर्न पाइँदैन।’
No Comments on लकडाउनले आम्दानी गुमेपछि ऋण लिन जग्गा धितो राख्ने क्रम बढ्यो
विगत तीन महिनाको लकडाउनका कारण आम्दानी नै गुमेपछि जग्गा धितो राखेर ऋण लिनेक्रम पछिल्लो एक सातामा ह्वात्तै बढेको छ । भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार असार सात गतेसम्म झण्डै सात हजार जग्गा रोक्का तथा फुकुवा भएको छ ।
आर्थिक कारोबार ठप्प भयो भन्दै लकडाउनकै बखत रोक्का तथा फुकुवाका मागसमेत आएको तर कार्यालय असार १ गतेदेखि खुलेपछि रोक्का फुकुवाको क्रम ह्वात्तै बढेको पौडेलले बताए ।
पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर, महिलाविना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ।
No Comments on पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर, महिलाविना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ।
No Comments on सेलाएर दोस्रोपटक तताएको चिया र टुटिसकेपछि जोडिएको रिलेसनमा पहिलाको जस्तो मिठास आउदैन
म पनि एक महिला हुँ, तर श्रीमानलाइ बि गार्ने महिला नै हुन, सहमत भए एक शेयर गर्नुहोला।
No Comments on म पनि एक महिला हुँ, तर श्रीमानलाइ बि गार्ने महिला नै हुन, सहमत भए एक शेयर गर्नुहोला।
मेरो भनाइमा सहमत हुनेले सेयर गर्नुस ! म पनि महिला हु तर श्रीमानलाई बिगार्ने महिलानै हुन् ! हामी महिलाहरु ले नै पुरुषलाई # भ्रष्टाचारि # ज ड्या हा ! पर स्त्री गमन (बाहिर मन तन डुलाउने घरमा बस्न मन नगर्ने) एस्तो स्वभाव को हुन बाध्य बनाउछौ ! आफ्नो श्रीमानलाइ अनावश्यक तनाव (अरुको धन सम्पत्ती वा गहना सङ्ग तौलेर), अनावश्यक केयर (बारम्बार निगरानी केरकार), माइती वा साथीहरू आफन्तको सामु हेपेर वा होच्याएर बोल्ने यस्ता काम कहिले नगर्नुहोस्.नेपाली श्रीमान साच्चिकै # देवदुत सावित हुनेछ्न ग्यारेन्टी ”
फेरि एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोश, म नेपाललाई युरोप भन्दा धेरै विकसित बनाउने छु! बाबुराम भट्टराई
No Comments on फेरि एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोश, म नेपाललाई युरोप भन्दा धेरै विकसित बनाउने छु! बाबुराम भट्टराई
प्रचण्ड–बाबुराम एक समयको चर्चित जोडी हो । तर पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई विपरित दिशामा रहेका छन् । भट्टराईले आफ्नो पार्टी काठमाडौंको मःम पसल जस्तो नभएको बताउँनु भएको छ । बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूराना पार्टीहरु भन्दा पार्टी फरक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत कुनै काम हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो सरकारबाट के आशा गर्ने, यो सरकारको काम देखेर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरियो । संघीय समाजवादी फोरम पनि त्यही बाटोमा छ । केही गर्छ कि भन्ने सबैको आशा सरकारले गलत साबित ग‍र्यो ।’ संयोजक भट्टराईले विप्लव नेतृत्वको माओवादीले लिएको बाटो गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो.